သင့်ကို သင့်ကောင်မလေး ပစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၆ ချက် – Gentleman Magazine
သင့်ကို သင့်ကောင်မလေး ပစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၆ ချက်
သငျ့ကို သငျ့ကောငျမလေး ပဈသှားရတဲ့ အကွောငျးရငျး ၁၆ ခကျြ
သင် တခြားကောင်မလေးနဲ့လဲ မဖောက်ပြန်ပါဘူး။ သင်တို့ နှစ်ပါတ်လည်ကိုလဲ သတိရပါတယ်။သူမအတွက် ပန်းတွေတောင် ပို့ပေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သင် အောက်ပါအမှား တစ်ခုခုကို လုပ်ခဲ့မိရင်တော့ သင် Single ဘဝကို ပြန်ရောက်ရမှာ အသေအချာပါ။
၁. သူမကို မကြည့်ခြင်း
မိန်းကလေးတွေဟာ မျက်လုံးခြင်းဆုံရတာကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကို အမြဲ ခေါ်တောကြည့်ကြီးနဲ့လဲ ကြည့်မနေပါနဲ့။ သူမစကားပြောရင် သူမကို ကြည့်ပေးပါ။ အဲဒါဟာ သင် သူမကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
၂. အရာအားလုံးကို ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ
သူမက ကားစပယ်ယာ ရိုင်းကြောင်း၊ သူမ Boss ခပ်ဆိုးဆိုးအကြောင်း၊ ယဉ်ကြောပိတ်တာအကြောင်း သင့်ကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒိအရာတိုင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူမက အဖြေလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်မှု လိုချင်တာပါ။
၃. Message ပဲပို့တာ
သင် မေးခွန်းတိုလေးတစ်ခု မေးချင်ရင်တော့ Message ပို့တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာလုံး ၃၀ ထက်ပိုတဲ့ စကားဝိုင်းတွေပြောရင်တော့ ဖုန်းခေါ်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လေသံက စာရိုက်ပြောတာထက် သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄. မေးခွန်း မမေးတာ
သူမ ပြောပြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်လှန်မေးခွန်းမထုတ်ရင် သင်က သူမဘဝကို စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာ ပြတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၅. သူမကိုပဲ အရာတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ အရာအားလုံးကို သူမကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချစေတာဟာ သူမပခုံးပေါ် အထုပ်ကြီး ပစ်တင်သလိုပါပဲ။ ကြာလာရင် သင်က သူမအပေါ် ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပါ ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့နှသ်ယောက် တိုင်ပင်ပြီး တူတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါ။
၆. သူမလုပ်ခိုင်းတာ မလုပ်တာ
သူမ ပြင်ခိုင်းထားတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက စာအုပ်စင်ဟာ တစ်လကြာတာတောင် အလုပ်မစရသေးပါဘူး။ အဲဒါဟာ အရေးမကြီးဘူး ထင်ရပေမယ့် သင့်ကောင်မလေးကို သင် အရေးမထားတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၇. အိမ်သာအဖုံး ပြန်မချတာ
အိမ်သာအဖုံး ပြန်မပိတ်လို့ ပွစိပွစိ လုပ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ သင် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေတာကို ပွစိပွစိ လုပ်တာပါ။ အိမ်သာအဖုံးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်သာအဖုံးပြန်ပိတ်တတ်ရင် ချမ်းတဲ့အခါ သူမကို သင့်အင်္ကျီ ဝတ်ပေးမယ်၊ ကားတံခါး ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကို သူမတို့ ယူဆတတ်ပါတယ်။
၈. အလုပ်မှာ သူမပုံလေး ထောင်မထားတာ
ယောက်ျားတွေဟာ အလုပ်စားပွဲမှာ သူတို့ဘာကောင်လဲဆိုတာ သိစေမယ့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်လေ့ ရှိပါတယ်။ သင့်အလုပ်ခွင်မှာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ သင့် ဘွဲ့ယူပုံပဲရှိပြီး သင့်ကောင်မလေးပုံ ပျောက်နေရင် သူမ စိတ်ဆိုးတာ မှန်ပါတယ်။ သူမပုံလေးကို ဘောင်သွင်းထားပြီး သင့်မှာ ရည်းစားရှိကြောင်းနဲ့ သင့်ရည်းစားအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြလိုက်ပါ။
၉. အလောတကြီး လုပ်တာ
မိန်းကလေးတွေဟာ Surprise အလုပ်ခံရတာ ကြိုက်ပေမယ့် သင်ကအမြဲ သူမကို Date ခေါ်သွားမယ့် အကြောင် အဲဒိမနက်မှ အသိပေးရင်တော့ သူမကို အလုပ်အားလို့ လာခေါ်တာ ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပါတ်လောက်ကြိုပြီး သင်တို့ Date အတွက် ကြိုချိန်းထားပါ။ အဲဒါမှ သင် သူမကို ဦးစားပေးအချိန်ပေးထားကြောင်း သိသာပါလိမ့်မယ်။
၁၀. သူမမှတ်ချက်တွေကို အရေးမထားတာ
သူမရဲ့ ” ငါ ထိုင်းစာကြိုက်တယ်” တို့ ” ဒီဖိနပ်လေး လှလိုက်တာ” တို့ဟာ အမြဲ စကားပြန်ရမဲ့ စကားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်က အဲ့ဒါကို သိကြောင်း၊ အလေးထားကြောင်းပြလိုက်ရင် သူမ နှစ်သက်သွားမှာပါ။ သူမပြောစကားကို အလေးထားကြောင်းလဲ ပြရာ ရောက်မှာပါ။
၁၁. သူမနဲ့ ရန်ဖြစ်ရင် တိတ်နေတာ
ရန်ဖြစ်ရင် အဆိုးဆုံးအရာက သူမကို အရေးမထားတာပါပဲ။ ပါးစပ်ပိတ်၊ လက်ပိုက်ပြီး သူမပြောသမျှ မကြားချင်ယောင် ဆောင်တာဟာ သင် သူမပြောသမျှ ဘာမှ မကြားချင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၁၂. အမြဲ နောက်ကျတာ
Date လုပ်ထားပြီး နာရီမကြည့်မိတာ၊ ကားပိတ်နေတာ တွေက တစ်ခါတစ်လေတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အမြဲဆိုသလို ငါးမိနစ် ၁၀ မိနစ် နောက်ကျနေရင်တော့ သူမ စိတ်ပျက်နေမှာပါ။ အဲဒိ အချိန်လေးက မဖြစ်စလောက်လေး ဆိုပေမယ့် သင့်ကောင်မလေးရဲ့ အချိန်ကို အလေးမထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် မယုံရဘူး ပြောတာနဲ့လဲ တူတူပါပဲ။
၁၃. သူမဟာသတွေကို လိုက်ရယ်မပေးတာ
သင် သူမ ရယ်စရာပြောဖို့ ကြိုးစားရင် ရယ်ပေးလိုက်တာဟာ သူမကို လေးစားကြောင်း ပြရာရောက်ပြီး သင် များများ ရယ်လေ သူမကိုယ်သူမ ပိုဂုဏ်ယူလာပြီး သင်တို့ ချစ်ဇာတ်လမ်း ခိုင်မြဲလေလေပါပဲ။
၁၄. သူမသူငယ်ချင်းတွေကို မသိတာ
သင် သူမရဲ့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်စရာ မလိုပါဘူး။ သူမနဲ့ သူမသူငယ်ချင်းတွေအကြား ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ကို လေးစားရပါမယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ သူမတို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှ သင့်ကို အဖြေပေးတာကိုလဲ မှတ်ထားပါ။
၁၅. တောင်းပန်စကား မပြောတာ
လူတိုင်း မျက်နှာပျက် မခံချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝ မတောင်းပန်ရအောင် မာနနဲ့ တင်းထားတာဟာ သင့်ကို FA ဖြစ်စေမှာပါ။ တောင်းပန်စကားတစ်ခွန်းဟာ နာကျင်နေတဲ့ နှလုံးသားကို ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။
၁၆. ပန်းကန်တွေကို ဆေးတဲ့နေရာမှာ ဒီတိုင်းထားခဲ့တာ
သင့်မိန်းမက အစေခံမဟုတ်ပါဘူး။ စုံတွဲတွေဟာ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို တူတူလုပ်နေရရင် အပျော်ဆုံးပါ။ ခုခေတ်မှာ ယောက်ျားမိန်းမ အလုပ်ခွဲခြားမှုဟာ ခေတ်မရှိတော့ပါဘူး။ အဝတ်ခေါက်တာ၊ ဖုန်စုပ်တာတို့လို သင်မလုပ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုတော့ သူမလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သငျ တခွားကောငျမလေးနဲ့လဲ မဖောကျပွနျပါဘူး။ သငျတို့ နှဈပါတျလညျကိုလဲ သတိရပါတယျ။သူမအတှကျ ပနျးတှတေောငျ ပို့ပေးပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ အောကျပါအမှား တဈခုခုကို လုပျခဲ့မိရငျတော့ သငျ Single ဘဝကို ပွနျရောကျရမှာ အသအေခြာပါ။
၁. သူမကို မကွညျ့ခွငျး
မိနျးကလေးတှဟော မကျြလုံးခွငျးဆုံရတာကို သဘောကပြါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမကို အမွဲ ချေါတောကွညျ့ကွီးနဲ့လဲ ကွညျ့မနပေါနဲ့။ သူမစကားပွောရငျ သူမကို ကွညျ့ပေးပါ။ အဲဒါဟာ သငျ သူမကို ဂရုစိုကျတယျဆိုတာ ပျေါလှငျစပေါတယျ။
၂. အရာအားလုံးကို ပွငျဆငျဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ
သူမက ကားစပယျယာ ရိုငျးကွောငျး၊ သူမ Boss ခပျဆိုးဆိုးအကွောငျး၊ ယဉျကွောပိတျတာအကွောငျး သငျ့ကို ပွောပွပါလိမျ့မယျ။ အဲဒိအရာတိုငျးကို ဖွရှေငျးဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ သူမက အဖွလေိုခငျြတာ မဟုတျပါဘူး။ နားလညျမှု လိုခငျြတာပါ။
၃. Message ပဲပို့တာ
သငျ မေးခှနျးတိုလေးတဈခု မေးခငျြရငျတော့ Message ပို့တာ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စာလုံး ၃၀ ထကျပိုတဲ့ စကားဝိုငျးတှပွေောရငျတော့ ဖုနျးချေါတာ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ လသေံက စာရိုကျပွောတာထကျ သငျတို့နှဈယောကျကို ဆကျသှယျပေးနိုငျပါတယျ။
၄. မေးခှနျး မမေးတာ
သူမ ပွောပွတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ပွနျလှနျမေးခှနျးမထုတျရငျ သငျက သူမဘဝကို စိတျမဝငျစားဘူးဆိုတာ ပွတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၅. သူမကိုပဲ အရာတိုငျး ဆုံးဖွတျခိုငျးတာ
ဆုံးဖွတျခကျြခရြတာ ပငျပနျးပါတယျ။ အရာအားလုံးကို သူမကိုပဲ ဆုံးဖွတျခကျြ ခစြတောဟာ သူမပခုံးပျေါ အထုပျကွီး ပဈတငျသလိုပါပဲ။ ကွာလာရငျ သငျက သူမအပျေါ ဂရုမစိုကျဘူးလို့ပါ ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။ သငျတို့နှသျယောကျ တိုငျပငျပွီး တူတူ ဆုံးဖွတျခကျြ ခပြါ။
၆. သူမလုပျခိုငျးတာ မလုပျတာ
သူမ ပွငျခိုငျးထားတဲ့ ဧညျ့ခနျးထဲက စာအုပျစငျဟာ တဈလကွာတာတောငျ အလုပျမစရသေးပါဘူး။ အဲဒါဟာ အရေးမကွီးဘူး ထငျရပမေယျ့ သငျ့ကောငျမလေးကို သငျ အရေးမထားတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၇. အိမျသာအဖုံး ပွနျမခတြာ
အိမျသာအဖုံး ပွနျမပိတျလို့ ပှစိပှစိ လုပျတတျတဲ့ ကောငျမလေးတှဟော သငျ ဖွဈကတတျဆနျးနတောကို ပှစိပှစိ လုပျတာပါ။ အိမျသာအဖုံးကွောငျ့ မဟုတျပါဘူး။ အိမျသာအဖုံးပွနျပိတျတတျရငျ ခမျြးတဲ့အခါ သူမကို သငျ့အင်ျကြီ ဝတျပေးမယျ၊ ကားတံခါး ဖှငျ့ပေးမယျလို့ကို သူမတို့ ယူဆတတျပါတယျ။
၈. အလုပျမှာ သူမပုံလေး ထောငျမထားတာ
ယောကျြားတှဟော အလုပျစားပှဲမှာ သူတို့ဘာကောငျလဲဆိုတာ သိစမေယျ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ တနျဆာဆငျလေ့ ရှိပါတယျ။ သငျ့အလုပျခှငျမှာ သငျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရိုကျထားတဲ့ပုံနဲ့ သငျ့ ဘှဲ့ယူပုံပဲရှိပွီး သငျ့ကောငျမလေးပုံ ပြောကျနရေငျ သူမ စိတျဆိုးတာ မှနျပါတယျ။ သူမပုံလေးကို ဘောငျသှငျးထားပွီး သငျ့မှာ ရညျးစားရှိကွောငျးနဲ့ သငျ့ရညျးစားအတှကျ ဂုဏျယူကွောငျး ပွလိုကျပါ။
၉. အလောတကွီး လုပျတာ
မိနျးကလေးတှဟော Surprise အလုပျခံရတာ ကွိုကျပမေယျ့ သငျကအမွဲ သူမကို Date ချေါသှားမယျ့ အကွောငျ အဲဒိမနကျမှ အသိပေးရငျတော့ သူမကို အလုပျအားလို့ လာချေါတာ ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။ တဈပါတျလောကျကွိုပွီး သငျတို့ Date အတှကျ ကွိုခြိနျးထားပါ။ အဲဒါမှ သငျ သူမကို ဦးစားပေးအခြိနျပေးထားကွောငျး သိသာပါလိမျ့မယျ။
၁၀. သူမမှတျခကျြတှကေို အရေးမထားတာ
သူမရဲ့ ” ငါ ထိုငျးစာကွိုကျတယျ” တို့ ” ဒီဖိနပျလေး လှလိုကျတာ” တို့ဟာ အမွဲ စကားပွနျရမဲ့ စကားတှေ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျက အဲ့ဒါကို သိကွောငျး၊ အလေးထားကွောငျးပွလိုကျရငျ သူမ နှဈသကျသှားမှာပါ။ သူမပွောစကားကို အလေးထားကွောငျးလဲ ပွရာ ရောကျမှာပါ။
၁၁. သူမနဲ့ ရနျဖွဈရငျ တိတျနတော
ရနျဖွဈရငျ အဆိုးဆုံးအရာက သူမကို အရေးမထားတာပါပဲ။ ပါးစပျပိတျ၊ လကျပိုကျပွီး သူမပွောသမြှ မကွားခငျြယောငျ ဆောငျတာဟာ သငျ သူမပွောသမြှ ဘာမှ မကွားခငျြဘူးလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
၁၂. အမွဲ နောကျကတြာ
Date လုပျထားပွီး နာရီမကွညျ့မိတာ၊ ကားပိတျနတော တှကေ တဈခါတဈလတေော့ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ အမွဲဆိုသလို ငါးမိနဈ ၁၀ မိနဈ နောကျကနြရေငျတော့ သူမ စိတျပကျြနမှောပါ။ အဲဒိ အခြိနျလေးက မဖွဈစလောကျလေး ဆိုပမေယျ့ သငျ့ကောငျမလေးရဲ့ အခြိနျကို အလေးမထားသလို ဖွဈနပေါတယျ။ သငျ့ကိုယျသငျ မယုံရဘူး ပွောတာနဲ့လဲ တူတူပါပဲ။
၁၃. သူမဟာသတှကေို လိုကျရယျမပေးတာ
သငျ သူမ ရယျစရာပွောဖို့ ကွိုးစားရငျ ရယျပေးလိုကျတာဟာ သူမကို လေးစားကွောငျး ပွရာရောကျပွီး သငျ မြားမြား ရယျလေ သူမကိုယျသူမ ပိုဂုဏျယူလာပွီး သငျတို့ ခဈြဇာတျလမျး ခိုငျမွဲလလေပေါပဲ။
၁၄. သူမသူငယျခငျြးတှကေို မသိတာ
သငျ သူမရဲ့ မိနျးကလေးသူငယျခငျြးတှကေို ခဈြစရာ မလိုပါဘူး။ သူမနဲ့ သူမသူငယျခငျြးတှအေကွား ရှိတဲ့ သံယောဇဉျကို လေးစားရပါမယျ။ မိနျးကလေးတှဟော သူမတို့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အရငျတိုငျပငျပွီးမှ သငျ့ကို အဖွပေေးတာကိုလဲ မှတျထားပါ။
၁၅. တောငျးပနျစကား မပွောတာ
လူတိုငျး မကျြနှာပကျြ မခံခငျြပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လုံးဝ မတောငျးပနျရအောငျ မာနနဲ့ တငျးထားတာဟာ သငျ့ကို FA ဖွဈစမှောပါ။ တောငျးပနျစကားတဈခှနျးဟာ နာကငျြနတေဲ့ နှလုံးသားကို ပွနျလညျကုစားပေးနိုငျတဲ့ အစှမျးရှိပါတယျ။
၁၆. ပနျးကနျတှကေို ဆေးတဲ့နရောမှာ ဒီတိုငျးထားခဲ့တာ
သငျ့မိနျးမက အစခေံမဟုတျပါဘူး။ စုံတှဲတှဟော အိမျမှုကိစ်စတှကေို တူတူလုပျနရေရငျ အပြျောဆုံးပါ။ ခုခတျေမှာ ယောကျြားမိနျးမ အလုပျခှဲခွားမှုဟာ ခတျေမရှိတော့ပါဘူး။ အဝတျခေါကျတာ၊ ဖုနျစုပျတာတို့လို သငျမလုပျတတျတဲ့အရာတှကေိုတော့ သူမလုပျပေးပါလိမျ့မယျ။
Previous: မိန်းကလေးတွေရဲ့ ရာသီနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သင် သိထားစရာ ၈ ချက်
Next: လက်ထပ်ဖို့အတွက် အဆိုးရွားဆုံး အကြောင်းပြချက် ၁၀ မျိုး